Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainan'ny fiainana taloha momba an'i Carroll Beckwith | Robert Snow - Fikarohana momba ny vatana teraka
Fomba fiaina: Fandresena amin'ny fiainana taloha
mpikaroka: Robert Snow
From: Sarin'ny skeptika taloha: ny tena tantaran'ny mpitsikilo polisyeincarnation
Article from: Teraka indray: tranga tany am-boalohany nateraky ny porofo momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny raharaha Xenoglossy notadiavin'i Ian Stevenson, by Walter Semkiw, MD
Ny Kapitenin 'i Robert Snow dia mamerina ny famerenana indray ny fiainana an-davanandro
Robert Snow dia kapitenin'ny misotro ronono tao amin'ny Departments Police Metropolitan Indianapolis, izay niandraikitra ny sampan-draharahan'ny homicide and robbery sy ny sampan-draharahan'ny Organized Crime. Nanoratra boky maro momba ny asan'ny polisy izy. Ankoatra izany, nanoratra boky iray antsoina hoe Looking for Carroll Beckwith i Captain Snow, Sarin'ny fiainana mivalo taloha, izay manadihady ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao amin'ny antsipiriany. Misy famintinana omena etsy ambany.
Ny tantaran'i Bob dia manomboka amin'ny fety iray, izay namaritan'ny polisim-pahaizana polisy iray, izay nitarika ny famerenan-dàlana ho fialamboly teo aloha, ho toy ny fialamboly. Nieritreritra i Captain Snow fa tsy maintsy noforonina ireo fahatsiarovan-tena ireo, fa izy ireo dia sary an-tsaina, ary nolazainy tamin'ny mpitsabo aretin-tsaina.
Gaga ilay manam-pahaizana, ka sahy nilaza ny tenany ho kapiteny ny Kapiteny Snow. Niteny i Snow hoe: "Azo antoka fa hanao izany aho," na dia tsy nanam-paniriana hanohy aza izy.
Na izany aza, ny mpitsabo matihanina dia nitazona an'i Snow ary niampanga azy ho "tahotra". Izany no nanao izany ary nitazam-potsiny fa nahazo famerenan-keloka ho an'ny mpampiofana ny fitsaboana hafa indray i Captain Snow ary nanendry andro maromaro. Nanapa-kevitra ny haka ilay famerenana izy raha tsy izany dia tsy ho toy ny hoe "nomena alahelo" izy. Tsy nino ny fitsangatsanganana indray ny rajako ary tsy nanantena ny hanana traikefa manan-danja nandritra ny fivoriana.
Ny endrika mahafinaritra amin'ny bokin'i Bob dia avo lenta amin'ny fisalasalana sy ny fahatsapana vazivazy mahatsikaiky izay mampisy ny tantara. Andeha isika hizara ny zavatra niainan'ny Kapiteny Snow tamin'ny alalan'ireo andalana manaraka avy amin'ny fitadiavana an'i Carroll Beckwith. Manomboka amin'ny fitsaboana aretin-tsaina, Dr. Mariellen Griffith, mitarika ny famerenana. Ny Dr. Griffith dia manomboka amin'ny fampianarana an'i Snow mba haka sary an-tsaina hoe miala sasatra ao an-tranony izy. Ny fitantarana avy amin'ny bokin'i Captain Snow dia manaraka:
“'Ankehitriny, alao sary an-tsaina ny tenanao ambony miditra ao amin'ny efitrano hiarahaba anao,' hoy i Dr Griffith.
Nanao izany koa aho, na dia nipetraka teo am-pandriana niaraka tamin'ny masoko aza aho, dia tsy afaka nanontany tena aho hoe inona ilay helo nataoko tany, indrindra moa fa nanontany ahy izy hoe inona no nataoko. Ahoana no hahalalako ny helo? Izany no nahaterahany. Saingy nanapa-kevitra ny hanandrana izany aho.
'Fotsy,' hoy ny navaliko, 'akanjo fotsy lava. Moa ve tsy izany no anaovan'ny fanahy rehetra? '
'Ny tenanao ambony dia mijoro eo ary manontany raha vonona handeha amin'ny dia ianao. Milaza aminao izany fa hitarika anao sy hiaro anao amin'ny dianao io. '
'Tompo ô, hoy aho, rehefa niezaka nihazona endrika tena matotra tamin'ny endrika ivelany aho dia tsy nino hoe manao an'io.' ”(1)
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha tsy nampoizin'i Robert Snow dia tena misy noho ny fahatsiarovan-tena
Tamin'ny farany sy tamin'ny fahatafintohinany dia nahatsapa fahatsiarovam-pahefana mahery vaika teo amin'ny fiainany ny Kapiteny Snow nandritra ny famerenana. Ny kapitalin'i Snow dia nitantara fa ny fomba fijeriny ny fisehoan-javatra teo amin'ny fiainana teo aloha dia mazava kokoa noho ny fahatsiarovan-tena. Tsaroany ny andrana maro samihafa, saingy ny iray izay nalaza indrindra dia sary nalaina tamin'ny taon-jato 19. Captain Snow dia nahatsiaro tsipiriany manokana momba ny 30 momba ity fiainana ity ho mpanakanto.
Fahatsiarovana mazava be dia be no nahatafiditra azy nandoko ny sarin'ny vehivavy hunchback. Kapiteny Snow dia nahatadidy mazava tsara ny zavatra niainany, ny dian-dian-doko izay nampiasaina hamoronana izany sary hosodoko izany, ary na dia ny fanontaniany hoe maninona ny olona iray manana fahasembanana miharihary no maniry sary. Ny famintinana ireo fahatsiarovana famerenana manokana indrindra dia omena etsy ambany: Trangam-panjakan'olo-tokana an'i Robert Snow & The Hunchback Woman
1. Nanao sary hosodoko izy
2. Nanao sary hoso-doko izy mba hahazoana vola saingy sarin'ny sary hosodoko
3. Nampiasa ilay anarana hoe "Jack"
4. Nampiasa tapa-tongotra izy
5. Nandany fotoana tany Frantsa ny vadiny sy izy
6. Tsy afaka nanan-janaka ny vadiny
7. Nilavo lefona izy ireo ary nifamaly tamin'ny vadiny momba ny vola
8. Na dia teo aza ny olana tamin'ny vola sy ny tsy fahafahana nanan-janaka, dia faly ny fanambadiany
9. Nanana trano fandraisam-bahiny izy ary nisy varavarankelin'ny varavarankely sy varavarankely
10. Nitoetra tany amina toeram-pambolena lehibe iray izy
11. Ny havany vavy dia maty noho ny rà
12. Nodimandry tao amin'ny tanàna lehibe iray izy ary nanana trano avo be tamin'ny faran'ny taona 1917
Niteraka fiantraikany lalina teo amin'ny Kapiteny Snow ilay fitarainana ka nanjary liana tamin'ny fikasana hamantatra raha marina izany. Ny Kapiteny Snow dia mbola tsy nino ny fitsangatsanganana indray ao amin'ny vatana vaovao ary niasa araka ny fiheverana fa nianarany momba ilay mpahaikanto sary tamin'ny lasa, tamin'ny alàlan'ny boky, tany an-tsekoly na tao amin'ny tranom-bakoka iray, ary nahitana fahatsiarovam-pahatsiarovana nipoitra.
Ny Kapitenin'ny polisy Robert Snow dia nanadihady ny fiainany teo aloha ho toy ny mpahary ny Portrait Portrait Woman
Snow dia nanadihady ny traikefa niainan'ny tranga toy ny raharaha polisy. Nodinihany fomba fijery momba ny zavakanto izy, nitsidika ny trano fivarotana zavakanto ary nifandray tamin'ny mpivarotra zavakanto, nitady ny sarin'ny vehivavy miondrika hitany tamin'ny famerenana, na nahita antony hafa. Na izany aza, tsy nahavita ny hamantatra ny mpanakanto ara-tantara mifanaraka amin'ny fitondran'ny fitondrana ny Kapiteny Snow.
Snow dia mpikaroka efa za-draharaha, nanoratra boky enina momba ny fitantanana polisy sy lohahevitra polisy hafa. Tena mahay koa izy; Navoakany tao amin'ny oniversite i A ary nahazo vatsim-pianarana manontolo ho an'ny diplaomatika momba ny psychologie. Na dia izany aza, aorian'ny taona iray nanandrana ny hahita ny sarin'ny vehivavy miondrika, dia tonga tamin'ny fiafaran-kavana izy. Nofintininy fa tsy azo inoana mihitsy fa mety ho afaka hamantatra ilay mpihira hitany nandritra ny famerenany izy.
Fanahy Masina na tari-dalana ara-panahy: Ny Kapiteny Robert Snow dia mahita ny vehivavy Hunchback ao New Orleans
Tamin'izay fotoana izay indrindra, ny vadin'i Captain Snow, Melanie, dia nanolo-kevitra fa hanao fitsangatsanganana any New Orleans izy ireo hankalaza ny tsingerin-taonany. Nanaiky i Bob.
Tamin'ny andro farany niainan'izy ireo, dia nirenireny tao amin'ny trano fivarotana frantsay tao New Quarters frantsay i Bob. Tao anatin'izany dia nanana traikefa lalina hafa izy. Ity zava-niseho ity dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny olona mitari-dalana, toa ny loharano ara-panahy, amin'ny fitadiavana ny fiainana taloha. Tao amin'ny galerie izay nalehan'i Captain Snow tamin'ny "vintana", dia hitany ny sarin'ny vehivavy mipentina niboridana tamin'ny fahaterahany. Manazava ny zava-misy i Captain Snow:
"Nihodinkodina aho, nibanjina ny mason-koditra teo am-pandriana, nanandrana ny traikefa nananako teo am-pamakivaky ny tariby mivantana tsy nahafantarako azy, ny fihenanako amin'izao fotoana izao amin'ny alàlan'ny làlan-dry zareo toy ny lanjan'ny angidimby sy ny tanako sy ny tongotro . . .
Nandritra ireo minitra vitsy nanaraka, dia tsy niala teo anoloan'ny portrétie aho, fa nanohy nanakimpy ny masoko mba hahita indray ny sehatry ny sary hosodoko ao amin'ny efitranoko, ary avy eo nanokatra ny masoko hahita ny tena izy sary efa vita. Nanomboka nahatsapa hafahafa ny toe-draharaha, toy ny nofinofy iray manjavozavo izay mahatsiaro mahatsiravina, nofinofy iray izay tsy maintsy hitenenanao foana fa nofy fotsiny izany. Tsy tena izy izany.
Manontany tena i Bob raha efa nokapohiny izy
Farany, na dia fantatro ihany aza fa io sary hoso-doko izay hitako teo ambany hypnosis io dia tena resy lahatra aho fa tafintohina amin'ny lozam-pifamoivoizana toy izany fa tsy dia mahagaga loatra raha marina. Niaraka tamin'ny hevitra aho nandritra ny fotoana vitsivitsy izay mety ho nasiako fatoriana kely ary nihevitra aho fa nijoro teo anoloan'ity sary ity, fony aho tao amin'ny trano fandriana iray any amin'ny toeram-pitsaboana tany ho any na tany amin'ny trano fitaizana be antitra.
Rehefa avy nandinika izany fotoana fohy izany aho dia nahatsapa fa tena nangetaheta ahy tokoa ny nahita valiny mirindra ny zava-nitranga. Fa kivy na tsia, ny zavatra toy izao dia tsy nitranga tamin'ny tena fiainana. Inona no vintana, aorian'ny fikarohana nandritra ny volana maro, fa hitranga amin'ny sary hosodoko toy izao aho? Inona no vintana mety hitranga raha te ho any New Orleans i Melanie, ary sendra mitsidika ity galerià ity isika, raha vao namidy ity sary hosodoko ity? ..
Nandritra ny 30 taona naha polisy ahy dia nitady ny marina foana aho. Indraindray ny marina tsy nivadika ho antenaiko, kanefa, ny marina no tadiaviko hatrizay. Ary ankehitriny, eto aho dia toa niatrika ny fahamarinana notadiaviko, nefa niaraka tamin'izay dia nanandrana nandà izany, niezaka nitady fomba rehetra handavana ny marina izay hitako. . . . Tsy nitranga tamin'ny tena olona ny zavatra tsy araka ny natiora. Angamba nanao izany tamin'ny sarimihetsika izy ireo, fa tsy tamin'ny tena fiainana. ” (2)
Avy amin'ny portrait, dia nahafantatra i Snow fa ny anaran'ilay mpanao hosodoko dia i J. Carroll Beckwith. Nihetsika indray ny rationan'ny ririnina. Nihevitra izy fa mety mbola nahita ity sarin'i vehivavy mipentimpentina tao amin'ny tranom-bakoka na tamin'ny fampiratiana ity. Nangataka ny mpiasa izy raha azo atao izany. Snow dia mamaritra ny valiny.
"Tsia", hoy ilay lehilahy nanozongozona ny lohany, "tsy mbola nahita an'io asa io ianao taloha. Ity sary ity dia teo an-tànana manokana nandritra ny taona maro. Ary ankoatra izay, avelao aho ho marin-toetra aminao, tsy heveriko fa nisy ny fampiratiana ny asan'i Beckwith nandritra ireo taona 75 farany. Tsy izy no malaza. "(3)
Fanahy na fitarihana fanahy
Azafady azafady fa azo inoana fa ny Kapiteny Snow dia tsy nahita ny sarin'ilay vehivavy mpitrandraka na kisendrasendra. Fa kosa, mino aho fa ny fanahy fanahy na ny fanahin'i Bob Snow manokana dia nandefa hafatra telepathic tamin'i Melanie vadiny, handeha any New Orleans. Toy izany koa, indray mandeha tany New Orleans, mino aho fa nisy fanahy iray na fanahin'i Bob nitondra azy nifindra tany amin'ny galeriana mba hahitany ny sarin'ilay vehivavy mihaza, izay, araka ny voalaza etsy ambany, no lakilen'ny famahana ny raharaha momba ny vatana vaovao indray. . Raha izany dia fanahy iray na fanahin'i Bob no tompon'andraikitra tamin'ny fanaovana an'ity fiainana lasa ity.
Nahita ny diarin'ny mpanao hosodoko sary tamin'ny fiainana taloha ny kapiteny Snow
Nahita tara-pandrika tatỳ aoriana i Beckwith tamin'ny fampisehoana farany tao 1911, talohan'ny nahaterahan'i Snow. Nahita ihany koa ny orana fa na dia tsy mpanakanto nalaza aza i Beckwith, dia mpandrindra tsara izy, toa an'i Bob. Beckwith dia lasa Filohan'ny National Academy of Design, any New York. Ny Akademia dia nitazona ny diarin'i Beckwith, ary koa ny autobiography tsy navoaka.
Avy amin'ny diarin'i Beckwith sy ny autobiography, i Snow dia afaka nanamarina ny faha-telon'ny fahatsiarovana manokana tamin'ny alàlan'ny famerenana azy, ary tafiditra ao anatin'izany ireo singa 12 voatonona etsy ambony.
Na dia tsy te hanaiky ny hanaiky ny fiverenan'ny vetaveta amin'ny voalohany aza ny fototry ny traikefa niainany, dia niafara ihany ny kapiteny Snow fa izy no Carroll Beckwith, izay nampiasa ny anarany Jack, nandritra ny androm-piainany teo aloha. Nolazainy fa nanaporofo ny fiverenan'ny vatana vaovao indray izy ary raha raha ny raharaha polisy, ny porofo napetrakany dia hitsangana any amin'ny fitsarana ary tsy hisy halaim-panafahana.
Ny Kapiteny Snow dia tsy mahatsapa fa misy ny fiainana ara-batana taloha
Mahaliana fa tsy nahafantatra ny fitoviana hita eo amin'ny tenany sy i Carroll Beckwith i Captain Snow. Rehefa nihaona voalohany ny Kapiteny Snow aho nandritra ny fivorian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fikarohana sy Fitsaboana IARRT (IARRT) tamin'ny volana septambra 2000, dia nanolo-tena haka ny sariny aho ary hampitaha azy amin'ny Beckwith. Fantatro tamin'ny zavatra niainako fa ireo fampitahana ireo dia tsara indrindra atao amin'ny fanangonana sary amin'ny lafiny iray amin'ny toe-javatra mitovy.
Ao amin'ny fampitahana sary dia eo ankavia i Beckwith ary eo amin'ny ilany havanana ny kapiteny Snow. Na dia efa kely loatra aza ny kapiteny Snow ary mahery kokoa amin'ny sary noho i Beckwith dia tamin'ny fotoana nanaovana ny sarin'ny portrait, dia tena mitovy amin'ny roa ny architecture. Samy nisafidy ny hitazona volombava mitovy amin'izany izy ireo.
Ny tranga nataon'ny kapiteny Snow dia mampiseho ny endri-javatra miavaka izay mitranga rehefa mahafantatra tsara ny fiainany taloha iray. Ny fampahalalam-baovao taloha dia matetika manakiana ny fihetseham-pon'ny olona iray, arahan'ny fe-potoana fampifandraisana. Rehefa miatrika ny fisian'ny vatana vaovao indray ny olona iray, dia ny famerenana indray ny fomba fijerin'ny olona iray an'izao tontolo izao.
Mandritra ny androm-piainana rehetra, isika rehetra dia manana fomba tokana mba hahatakarana an'izao tontolo izao. Izany rafitra fandriampahalemana izany dia mety hahitana lafiny ara-panahy eo amin'ny fiainana, na ny fomba fijery tsy mpino tsy manara-dalàna. Amin'ny ankapobeny dia tonga amin'ny fahatakarantsika ny filôzôfônika amin'izao tontolo izao isika ary amin'ny ankapobeny dia manohitra ny fanovana ny fomba fijerintsika.
Ny fisehoan-javatra momba ny teraka indray ao amin'ny vatana vaovao dia mety hanakorontana
Na inona na inona rafitr'ity finoana ity, ny porofo mivaingana momba ny vatana vaovao indray dia mitaky fanovana ny rafi-pinoana. Na dia efa inoana aza fa mino ny fiverenan'ny vatana vaovao indray, dia mety ho menatra ny fiovana avy amin'ny finoana ny fiainana taloha mba hahafantarana ny porofo manamarina ny fiverenan'ny vatana vaovao.
Tsarovy fa ny Kapiteny Snow dia tsy nino ny fitsangatsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao tamin'ny fotoana nialany aina ary taorian'ny nanandramany ny fiainany teo aloha, dia nitady ny fanazavana an-tsoratra momba ny fahatsiarovany izy. Na dia tafintohina tao amin'ny sarin'ny vehivavy mipetrapetraka tao amin'ny galeran'ny zavakanto tao New Orleans aza ny Kapiteny Snow, dia mbola nandinika ny mety hisehoan'ny asan'i Beckwith tao amin'ny tranom-bakoka iray ary tamin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainany no nijereny azy.
Nianjera tamin'ny tazo ny ranomandry fa niaina fahatsiarovan-tsofina nipoitra avy amin'ny fiainany amin'izao fotoana izao ny traikefa ananany. Andeha isika hijery ny fanehoan-kevitry ny kapiteny Snow rehefa nilaza taminy ny mpivarotra any Nouvelle-Orléans fa tsy afaka nahita ny sarin'ilay bobongolo tao amin'ny tranombakoka na fampiratiana izy. Snow explains:
"Rehefa nameno ny fanazavako tamin'ny fomba mahagaga aho noho ny valin'ny fanontaniana momba ny zava-nitranga, dia niverina ny kambana. Ny rafi-pinoan'ny ankapobeny dia tsy vitan'ny tezitra fotsiny. Nianjera izany. Ny zava-drehetra manodidina ahy dia nanana fihetseham-po mahatsikaiky toy izany ka mety ho tao amin'ny tantara Kafka. Ary dia nijanona teo fotsiny aho teo am-bava, nahatsapa ho tsy nahatsiaro tena sy niala tamin'ny zava-misy. "
Isika dia mila manitsy ny rafi-pinoana misy antsika ho porofo mivaingana ny fiverenan'ny vatana vaovao eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny, tsara ny vaovao, saingy mila kely fotsiny ny vaovao.
Ny lohalika an'ny kapiteny Snow dia mamangy rehefa mitsidika ny fasana fiainany taloha izy
Ao amin'ny sary omena ankavanana, Robert Snow dia mitsidika ny fasan'i Carroll Beckwith, izany hoe, mitsidika ny fasany i Snow hatramin'ny taloha. Nanoratra tao amin'ny bokiny i Snow fa tao amin'ny fasan'i Beckwith, nanomboka nihovotrovotra tsy nisy fifehezana ny lohaliny havia ary safotry ny hatsembohana izy, sahala amin'ny polisin'ny rookie tamin'ny toe-javatra iray nandrahona ny ainy. Nihevitra i Snow fa teo am-panaovana ny asany, dia voatifitra izy ary nanandrana nanindrona azy ny olona ahiahiana, saingy tsy nisy zavatra nampivadi-po azy toy ny fahitana fiainana taloha.
Jereo ny lahatsarin'i Robert Snow amin'ny filazana ny tantarany amin'ny fomba mahavariana: Robert Snow Video
Fitoviana ara-batana: Na dia tsy tsapan'i Robert Snow aza tamin'ny voalohany fa misy fitoviana eo aminy sy Beckwith, misy ny fitoviana.
Fanahy na fitarihana fanahy: Ny fandrosoana tamin'ny fanamarinana ity tranga ity tamin'ny nahaterahan'i Maria no tonga rehefa nahita ny sarin'ny vehivavy miondrika ao New Orleans ny kapiteny Snow. Ny fifandisako dia tsy nifanandrify akory izany fa ny fahatongavan'i Bob kosa ho an'ny sary hosodoko tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy.
Azo inoana fa ny fanahy iray na ny fanahin'i Robert Snow manokana dia nampiditra ny eritreritra tao an-tsain'ny vadiny fa tokony hitsidika an'i New Orleans izy ireo mandritra ny tsingerintaona nahaterahan'izy ireo. Indray mandeha tany New Orleans, notarihina tamim-pahavitrihana i Bob ho any amin'ny galeran'ny zavakanto izay nahitany ny sarin'ilay vehivavy mihaza.
Avy amin'ny sary dia fantany ny anaran'ilay mpanakanto, Carroll Beckwith, ary avy eo afaka nahita ny diarin'i Beckwith izy, izay namela azy hanamarina ny fiainany taloha tamin'ny Beckwith. Tranga reincarnation marobe no misy an'izany tari-dalana hita avy amin'ny fanahy.
Saripika: Ny sarin'ny bobongolo voalaza ao amin'ny lahatsary etsy ambony dia tsy avy amin'ny sary hosodoko nataon'I Carroll Beckwith, izay novidin'ny olona tsy fantatra anarana. Raha ianao no tompon'ny sary hosodoko Beckwith momba ilay vehivavy mendri-kaja ary ho tsara fanahy hamela sary iray eo amin'ny tranokala ReincarnationResearch.com, azafady, mifandraisa amin'i Walter Semkiw, MD amin'ny: walter@ReincarnationResearch.com
1. Snow, Robert: Mitady Carroll Beckwith, Daybreak / Rodale Books, 1999, p. 12-13
2. Snow, Robert: Mitady Carroll Beckwith, Daybreak / Rodale Books, 1999, p. 79-84
3. Snow, Robert: Mitady Carroll Beckwith, Daybreak / Rodale Books, 1999, p. 89